Romance – Alpha Premium
Crush (2022) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာ Crush(2022)ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာက်ကားထဲမှာတော့ အမျိူးသမီးချင်းသာစိတ်ဝင်စားတဲ့ ပေးဂျ်ဆိုတဲ့ေ ‌ကောင်မလေးရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရှိရမှာပါ။ ပေးဂျ်ဟာ CalArtsကျောင်းကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်မလေးပါ။ ပေးဂျ်တက်ရောက်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းရဲ့နံရံတွေမှာ ပန်းချီပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာကင်းပန်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပန်းချီတွေဆွဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ ပေးဂျ်ဟာ ကင်းပန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသံသယအဝင်ခံရပြီးတဲ့နောက် ကျောင်းကနေဆိုင်းငံ့ခံရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် သူဟာ သူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဒီလ်လွန်နဲ့စတေစီရယ်၊ သူငယ်ငယ်ကတည်းကသဘောကျခဲ့ရတဲ့ဂါဘရီအယ်လာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးရယ်ပါဝင်တဲ့ track teamထဲမှာ အတူတူပါဝင်ရင်း ကင်းပန်အစစ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာရှာဖို့ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒီလိုပါဝင်ရင်းနဲ့ပဲ သူဟာ ဂါဘရီအယ်လာရဲ့အမြွှာညီအစ်မ'အေဂျေ'နဲ့အတူလေ့ကျင်ဖို့ဖြစ်လာပြီး နှစ်ယောက်အတူတူအချိန်တွေအများကြီးကိုဖြတ်သန်းလာရတဲ့အခါမှာတော့....... ဂါဘရီအယ်လာရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ပေးဂျ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကရော ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ သူဟာ ဘယ်လိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုများတွေ့ကြုံရမလဲ၊ကင်းပန်ကိုရော ဘယ်လိုရှာတွေ့သွားမလဲ၊အေဂျေနဲ့ရော ဆက်ပြီးအဆင်ပြေသွားပါ့မလားဆိုတာကိုဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာ Crush(2022)ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္ဇာတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇာက္ကားထဲမွာေတာ့ အမ်ိဴးသမီးခ်င္းသာစိတ္ဝင္စားတဲ့ ေပးဂ်္ဆိုတဲ့ေ ‌ေကာင္မေလးရဲ႕အခ်စ္ေရးအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေတြ႕ရွိရမွာပါ။ ေပးဂ်္ဟာ CalArtsေက်ာင္းကိုဝင္ခြင့္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ေကာင္မေလးပါ။ ေပးဂ်္တက္ေရာက္ေနတဲ့အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕နံရံေတြမွာ ပန္းခ်ီပညာရွင္တစ္ေယာက္ဟာကင္းပန္ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ပန္းခ်ီေတြဆြဲခဲ့တယ္။အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ေပးဂ်္ဟာ ကင္းပန္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးသံသယအဝင္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာင္းကေနဆိုင္းငံ့ခံရဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူဟာ သူရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ ဒီလ္လြန္နဲ႔စေတစီရယ္၊ သူငယ္ငယ္ကတည္းကသေဘာက်ခဲ့ရတဲ့ဂါဘရီအယ္လာလို႔ေခၚတဲ့ေကာင္မေလးရယ္ပါဝင္တဲ့ track teamထဲမွာ အတူတူပါဝင္ရင္း ကင္းပန္အစစ္ကဘယ္သူလဲဆိုတာရွာဖို႔ျဖစ္လာပါၿပီ။ အဲ့ဒီလိုပါဝင္ရင္းနဲ႔ပဲ သူဟာ ဂါဘရီအယ္လာရဲ႕အႁမႊာညီအစ္မ'ေအေဂ်'နဲ႔အတူေလ့က်င္ဖို႔ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ေယာက္အတူတူအခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးကိုျဖတ္သန္းလာရတဲ့အခါမွာေတာ့....... ဂါဘရီအယ္လာရဲ႕အေပၚမွာထားရွိတဲ့ေပးဂ်္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကေရာ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ၊ သူဟာ ဘယ္လိုမေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အေျခအေနေတြကိုမ်ားေတြ႕ႀကဳံရမလဲ၊ကင္းပန္ကိုေရာ ဘယ္လိုရွာေတြ႕သြားမလဲ၊ေအေဂ်နဲ႔ေရာ ဆက္ၿပီးအဆင္ေျပသြားပါ့မလားဆိုတာကိုဇာတ္ကားထဲမွာ ဆက္လက္ခံစားၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္။ Review – KKK File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle ...
IMDB: 6.2/10 1.2k votes
365 Days: This Day (2022) ##unicode Are you lost, baby girl? ဆိုပြီး ပထမဇာတ်ကားမှာတင် ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ 365 daysဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲထွက်ရှိလာတဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကား 365days: this day ကို အားပေးလို့ရပါပြီနော် အခုကားမှာကတော့ ဇာတ်ဝင်ခန်း အကြမ်းကြီးတွေကို သီချင်းတွေနဲ့ မြင်တွေ့သွားရဦးမှာပါ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ လော်ရာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ပြီးနောက်မှာ မက်စီမိုကို စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်လာတဲ့ လော်ရာနဲ့ လော်ရာကို အချစ်လွန်ရာက ချုပ်ချယ်သလိုဖြစ်လာတဲ့ မက်စီမိုတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ကြမလဲဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ ဒါ့အပြင် မက်စီမိုမှာ မိသားစုမရှိဘူးလို့ ထင်ခဲ့ရာက ညီတစ်ယောက်ရှိနေတာကို လော်ရာသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် လော်ရာက စိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ် မက်စီမိုက ဘာလို့ သူ့ညီကို မုန်းတီးပြီး ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် ပထမထွက်ခဲ့တဲ့ 365 daysရဲ့ အရသာတွေ တစ်စက်မှမလျှော့သွားလို့ လက်မလွှတ်တမ်း ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Are you lost, baby girl? ဆိုၿပီး ပထမဇာတ္ကားမွာတင္ ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ...
Aadavaallu Meeku Johaarlu (2022) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးထားတာကတော့Aadavallu Meeku Johaarlu(2022 )လို့ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီအချစ်ဟာသကားလေးထဲမှာတော့ အမျိုးသမီးငါးယောက်ရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ချီရူဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအလွဲလေးတွေဖြစ်လာမလဲ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာကို ရယ်ရယ်မောမောပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ချီရူဟာ အမေတစ်ယောက်နဲ့အဒေါ်လေးယောက်ရဲ့သည်းသည်းလှုပ်ချစ်တဲ့အချစ်တွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ထိုအမျိုးသမီးငါးယောက်ဟာ ချီရူရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အတိမ်းအစောင်းမခံနိုင်ကြပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ ချီရူနဲ့သင့်တော်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်ရာကနေ ချီရူဟာ လက်ထပ်ဖို့ကြန့်ကြာနေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ချီရူဟာ အာဓီယာလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက် ချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချီရူရဲ့ အချစ်တွေကိုဖွင့်ဟဝန်ခံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ အာဓီယာဟာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ အာဓီယာဟာ သူ့အမေကအိမ်ထောင်မပြုစေချင်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ချီရူသိသွားတဲ့အခါမှာတော့....... အာဓီယာရဲ့အမေ သူ့အပေါ်အကောင်းမြင်လာအောင် သူဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲ၊ အာဓီယာ့အမေရဲ့သဘောထားတွေကရော ပြောင်းလဲသွားပါ့မလား၊ ချီရူဟာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ဖြေရှင်းသွားရမလဲဆိုတာကို ဇာတ်ကားထဲမှာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ရယ်ရယ်မောမောကြည့်ရှုကြရမှာပါနော်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးထားတာကေတာ့Aadavallu Meeku Johaarlu(2022 )လို႔ေခၚတဲ့ အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီအခ်စ္ဟာသကား​ေလးထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငါးေယာက္ရဲ႕ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈေအာက္မွာႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ခ်ီ႐ူဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္မိသြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအလြဲေလးေတြျဖစ္လာမလဲ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲဆိုတာကို ရယ္ရယ္ေမာေမာေပါ့ေပါ့ပါးပါးၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ။ ခ်ီ႐ူဟာ အေမတစ္ေယာက္နဲ႔အေဒၚေလးေယာက္ရဲ႕သည္းသည္းလႈပ္ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြၾကားမွာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးငါးေယာက္ဟာ ခ်ီ႐ူရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ခ်ီ႐ူနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုရွာမေတြ႕ႏိုင္ပဲျဖစ္ရာကေန ခ်ီ႐ူဟာ လက္ထပ္ဖို႔ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ခ်ီ႐ူဟာ အာဓီယာလို႔ေခၚတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ခ်စ္မိသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်ီ႐ူရဲ႕ အခ်စ္ေတြကိုဖြင့္ဟဝန္ခံဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာေတာ့ အာဓီယာဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ အာဓီယာဟာ သူ႔အေမကအိမ္ေထာင္မျပဳေစခ်င္တဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီ႐ူသိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့....... အာဓီယာရဲ႕အေမ သူ႔အေပၚအေကာင္းျမင္လာေအာင္ ...
IMDB: 7.3/10 273 votes
Stand Up Rahul (2022) (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ နာမည်ကျော်မင်းသား Raj Tarunရဲ့‌ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ကားဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကြည့်ရူရမယ့် ဟာသ ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းသမီးကတော့ Varsha Bollammaဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် အတွဲညီညီ ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်သွားမလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ မိဘတွေကြားမှာ ရာဟူးဟာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ် လူတွေကို စတတ်ပြောင်တတ်တဲ့ ရာဟူးဟာ ဟာသပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ တကယ်တော့ ရာဟူးရဲ့ လူတွေကို စတတ်ပြောင်တတ်တဲ့စိတ်ဟာ ကွာရှင်းထားတဲ့မိဘတွေကြောင့် နာကျင်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးဘဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ ရာဟူးတစ်ယောက် ရှရီယားယာအိုဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ပြီး ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာလည်း သူ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြိုလဲမှုကြောင့် အချစ်ကိုကြောက်နေတဲ့ ရာဟူးဟာ အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း အယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါဘူး သနားစရာ ရာဟူးရဲ့အချစ်ရေး ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲ ရာဟူးရဲ့ ဟာသပညာရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ကိုရော အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလား ဒီဇာတ်ကားမှာ စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္မင္းသား Raj Tarunရဲ႕‌ ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိလာတဲ့ကားျဖစ္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ ၾကည့္႐ူရမယ့္ ဟာသ ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ မင္းသမီးကေတာ့ Varsha Bollammaျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အတြဲညီညီ ဘယ္လိုသ႐ုပ္ေဖာ္သြားမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတဲ့ မိဘေတြၾကားမွာ ရာဟူးဟာ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ပါတယ္ လူေတြကို ...
IMDB: 6.7/10 185 votes
Battle: Freestyle (2022) (App only) (free ႀကည့္ခ်င္သူမ်ားလဲ app ကေနႀက္ညလ့ို႔ရပါတယ္) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "Battel Freestyle"ဆိုတဲ့ကားလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ အမ်မလီယာဟာ အီလစ်စစ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဖွဲ့ထားကြတဲ့အကအဖွဲ့လေးက အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့အီလစ်စစ်အဖွဲ့ဟာပဲရစ်မှာကျင်းပတဲ့နာမည်ကြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက် အရည်အချင်းမီတယ်ဆိုပြီးစာရောက်လာပါတယ် ဒီလိုနဲ့အမ်မလီယာတို့သူငယ်ချင်းတစ်စု ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ပဲရစ်ကိုရောက်လာကြပါတယ် ဒါပေမယ့်ပြဿနာကအမ်မလီယာငယ်ငယ်ကတည်းကပစ်ထားခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ ပဲရစ်မှာအခြေချနေပါတယ် အမ်မလီယာတစ်ယောက်သူ့အမေကိုတွေ့ဖို့အတွက် အဖွဲ့ဝင်တွေကို မပြောဘဲထွက်သွားတာများတဲ့အခါအဖွဲ့ဝင်တွေကလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာပါတယ် ဒီလိုနဲ့အမ်မလီယာတို့အဖွဲ့ကြားမှာပဋိပက္ခတွေအချင်းများမှုတွေဖြစ်လာပါတော့တယ် အမ်မလီယာတစ်ယောက်ပြိုင်ပွဲတစ်ဖက် အမေဖြစ်သူကတစ်ဖက်နဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲ သူ့ရဲ့အကအဖွဲ့ကရောနာမည်ကြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကြားမှာအနိုင်ရယူနိုင်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ "Battel Freestyle"ဆိုတဲ့ကားေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ အမ္မလီယာဟာ အီလစ္စစ္ဆိုတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလုံးစိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ဖြဲ႕ထားၾကတဲ့အကအဖြဲ႕ေလးက အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ တစ္ေန႔မွာေတာ့သူတို႔ရဲ႕အီလစ္စစ္အဖြဲ႕ဟာပဲရစ္မွာက်င္းပတဲ့နာမည္ႀကီးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအတြက္ အရည္အခ်င္းမီတယ္ဆိုၿပီးစာေရာက္လာပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔အမ္မလီယာတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔အတြက္ ပဲရစ္ကိုေရာက္လာၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ျပႆနာကအမ္မလီယာငယ္ငယ္ကတည္းကပစ္ထားခဲ့တဲ့မိခင္ျဖစ္သူဟာ ပဲရစ္မွာအေျခခ်ေနပါတယ္ အမ္မလီယာတစ္ေယာက္သူ႔အေမကိုေတြ႕ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို မေျပာဘဲထြက္သြားတာမ်ားတဲ့အခါအဖြဲ႕ဝင္ေတြကေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔အမ္မလီယာတို႔အဖြဲ႕ၾကားမွာပဋိပကၡေတြအခ်င္းမ်ားမႈေတြျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ အမ္မလီယာတစ္ေယာက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ဖက္ အေမျဖစ္သူကတစ္ဖက္နဲ႔ျပႆနာေတြကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းသြားမလဲ သူ႔ရဲ႕အကအဖြဲ႕ကေရာနာမည္ႀကီးၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြၾကားမွာအႏိုင္ရယူႏိုင္သြားႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Link ဒေါင်းနည်း
Radhe Shyam (2022) ##unicode နာမည်ကျော်မင်းသား Prabhas နဲ့ မင်းသမီး Pooja Hegdeပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးထွက်အချစ်ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖူးစာပါလို့ချစ်သူတွေဆုံတွေ့တတ်ကြပေမယ့် ဖူးစာမပါလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီး ကံကြမ္မာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ချစ်မိသွားတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့နာမည်ကြီး လက္ခဏာကြည့်ပညာရှင် အာဒိတရာနဲ့ ဆရာဝန်မလေး ပရီနာဟာ အီတလီမှာဆုံခဲ့ကြပါတယ် အာဒိတရာဟာ အနာဂတ်ကိုကြိုသိနိုင်တဲ့လူဖြစ်တာကြောင့် သူ့လက္ခဏာမှာအချစ်ရေးလမ်းကြောင်းမပါတာကို သူသိခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် သူက ဘယ်သူ့ကိုမှချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကောင်မလေးတွေကိုအပျော်ပဲတွဲခဲ့တာပေါ့ ပရီနာနဲ့ဆုံတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ ချစ်မိသွားဖို့မရည်ရွယ်ပဲချစ်မိသွားခဲ့တဲ့အခါ… လက္ခဏာပညာရှင်တစ်ယောက်က ကိုယ့်လက္ခဏာကပြထားတဲ့ကံကြမ္မာကိုဆန့်ကျင်ပြီး သူ့အချစ်ရေးခရီးလမ်းကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာ ဒီအချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးမှာခံစားကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi နာမည္ေက်ာ္မင္းသား Prabhas နဲ႔ မင္းသမီး Pooja Hegdeပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးထြက္အခ်စ္ဇာတ္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဖူးစာပါလို႔ခ်စ္သူေတြဆုံေတြ႕တတ္ၾကေပမယ့္ ဖူးစာမပါလာတဲ့လူႏွစ္ေယာက္ဆုံေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး ကံၾကမၼာအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ခ်စ္မိသြားတဲ့အခါျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကို ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပါ အနာဂတ္ကိုႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္တဲ့နာမည္ႀကီး လကၡဏာၾကည့္ပညာရွင္ အာဒိတရာနဲ႔ ဆရာဝန္မေလး ပရီနာဟာ အီတလီမွာဆုံခဲ့ၾကပါတယ္ အာဒိတရာဟာ အနာဂတ္ကိုႀကိဳသိႏိုင္တဲ့လူျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႔လကၡဏာမွာအခ်စ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမပါတာကို သူသိခဲ့ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သူက ဘယ္သူ႔ကိုမွခ်စ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေကာင္မေလးေတြကိုအေပ်ာ္ပဲတြဲခဲ့တာေပါ့ ပရီနာနဲ႔ဆုံတဲ့တစ္ေန႔မွာေတာ့ ခ်စ္မိသြားဖို႔မရည္႐ြယ္ပဲခ်စ္မိသြားခဲ့တဲ့အခါ… လကၡဏာပညာရွင္တစ္ေယာက္က ကိုယ့္လကၡဏာကျပထားတဲ့ကံၾကမၼာကိုဆန႔္က်င္ၿပီး သူ႔အခ်စ္ေရးခရီးလမ္းကို ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲဆိုတာ ဒီအခ်စ္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးမွာခံစားၾကည့္႐ူအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1.4GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle ...
IMDB: 6.9/10 20,813 votes
Hey! Sinamika (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အချစ်ဟာသဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ရာလန်နဲ့မိုနာဟာမတော်တကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ကြရင်း အချင်းချင်းမေတ္တာမျှသွားရာကနေ မကြာခင်မှာပဲလက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ် ရာလန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျင့်တစ်ခုက အရာရာကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီး စကားအရမ်းများတတ်တာပါ ချစ်စကြင်နာစအချိန်တုန်းကတော့ရာလန်ရဲ့ဒီအကျင့်က မိုနာအတွက်အဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထောင်သက်တမ်းနှစ်နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့မိုနာတစ်ယောက် သူ့ယောက်ျားရာလန်ရဲ့စကားများတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်ကုန်လာပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့မိုနာဟာရာလန်နဲ့ကွာရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါတော့တယ် အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာကာဂျယ်ဆိုတဲ့လင်မယားတွေအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ် သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူ့ဆီကိုရောက်လာတဲ့လင်မယားစုံတွဲတိုင်းကိုကွဲကွာသွားအောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် မိုနာတစ်ယောက်ဆရာမကာဂျယ်ရဲ့အကူအညီနဲ့သူ့ယောက်ျားရာလန်ကိုကွာရှင်းနိုင်ပါ့မလား မိုနာနဲ့ရာလန်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာဦးမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့အခ်စ္ဟာသဇာတ္ကားေလးတစ္ကားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ရာလန္နဲ႔မိုနာဟာမေတာ္တေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာေတြ႕ၾကရင္း အခ်င္းခ်င္းေမတၱာမွ်သြားရာကေန မၾကာခင္မွာပဲလက္ထပ္လိုက္ၾကပါတယ္ ရာလန္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့အက်င့္တစ္ခုက အရာရာကိုေမးခြန္းထုတ္ၿပီး စကားအရမ္းမ်ားတတ္တာပါ ခ်စ္စၾကင္နာစအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ရာလန္ရဲ႕ဒီအက်င့္က မိုနာအတြက္အဆန္းမဟုတ္ခဲ့ေပမယ့္ အိမ္ေထာင္သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့မိုနာတစ္ေယာက္ သူ႔ေယာက္်ားရာလန္ရဲ႕စကားမ်ားတဲ့အက်င့္ကိုစိတ္ကုန္လာပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မလို႔မိုနာဟာရာလန္နဲ႔ကြာရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီမွာေဒါက္တာကာဂ်ယ္ဆိုတဲ့လင္မယားေတြအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့ဆရာမတစ္ေယာက္ကိုသြားေတြ႕ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့သူ႔ဆီကိုေရာက္လာတဲ့လင္မယားစုံတြဲတိုင္းကိုကြဲကြာသြားေအာင္လုပ္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္ မိုနာတစ္ေယာက္ဆရာမကာဂ်ယ္ရဲ႕အကူအညီနဲ႔သူ႔ေယာက္်ားရာလန္ကိုကြာရွင္းႏိုင္ပါ့မလား မိုနာနဲ႔ရာလန္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာဦးမွာလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Link ဒေါင်းနည်း
Hey! Sinamika (2022)
[email protected] (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဆတ်သရာဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာဆိုရင်ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဘဝနေထိုင်ရေး စားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရင်း တစ်ဦးတည်းသောညီမဖြစ်သူပညာတတ်ကြီးဖြစ် ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေထိုင်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ညီမဖြစ်သူဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစာရိတ်ဆိုတာကလည်းမနည်းလှပါဘူး ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားဆတ်သရာအတွက်ပိုက်ဆံရပေါက်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါကတော့မာလာဗီကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကြောင့်ပါပဲ မာလာဗီကာရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်ဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် သမီးဖြစ်သူကိုတော့မပြောပြထားပါဘူး ထူးဆန်းစွာဘဲ မာလာဗီကာရဲ့သမီးဖြစ်သူဟာဆတ်သရာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဖေဆိုပြီးခင်တွယ်နေပါတော့တယ် မာလာဗီကာဟာသမီးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆတ်သရာကိုပိုက်ဆံတွေပေးပြီးအဖေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပေးဖို့ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ် ဒီလိုလိမ်ညာမှုတွေကြားထဲသူတို့သုံးယောက်ဘဝတွေဘယ်လိုရှုပ်ထွေးကုန်ကြမလဲ ဆတ်သရာရဲ့ဘဝမှာရောဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့အိႏၵိယဒရမ္မာဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ဆတ္သရာဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာဆိုရင္ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ႀကီးမွာအလုပ္လုပ္ရတဲ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ ဘဝေနထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးအတြက္႐ုန္းကန္ရင္း တစ္ဦးတည္းေသာညီမျဖစ္သူပညာတတ္ႀကီးျဖစ္ ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ညီမျဖစ္သူဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ကုန္က်စာရိတ္ဆိုတာကလည္းမနည္းလွပါဘူး ဒီလိုနဲ႔တစ္ေန႔မွာေတာ့ကံေကာင္းတယ္ပဲေျပာရမလားဆတ္သရာအတြက္ပိုက္ဆံရေပါက္တစ္ခုေပၚလာခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒါကေတာ့မာလာဗီကာဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးနဲ႔သူ႔ရဲ႕သမီးျဖစ္သူေၾကာင့္ပါပဲ မာလာဗီကာရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာကားအက္စီးဒင့္ေၾကာင့္ဆုံးသြားခဲ့ေပမယ့္ သမီးျဖစ္သူကိုေတာ့မေျပာျပထားပါဘူး ထူးဆန္းစြာဘဲ မာလာဗီကာရဲ႕သမီးျဖစ္သူဟာဆတ္သရာကိုေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာအေဖဆိုၿပီးခင္တြယ္ေနပါေတာ့တယ္ မာလာဗီကာဟာသမီးစိတ္ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ဆတ္သရာကိုပိုက္ဆံေတြေပးၿပီးအေဖအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ေပးဖို႔ငွားရမ္းခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုလိမ္ညာမႈေတြၾကားထဲသူတို႔သုံးေယာက္ဘဝေတြဘယ္လိုရႈပ္ေထြးကုန္ၾကမလဲ ဆတ္သရာရဲ႕ဘဝမွာေရာဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Link ဒေါင်းနည်း
[email protected] (2022)
Super Machi (2022) (App member only) ##unicode Super Machiဇာတ်ကားမှာတော့ Rajuလို့ခေါ်တဲ့ ကမ်းခြေကဘားတစ်ခုက အဆိုတော်ကောင်လေးကို Meenashiလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်ခွင့်လာပန်ခဲ့တယ်။Meenashiဟာ Rajuထက်ပညာတတ် အလုပ်အကိုင်ကောင်းတဲ့အပြင် အရာရာပြီးပြည့်စုံပြီး ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ Rajuကတော့ သဘောမကျခဲ့တာကြောင့် Meenashiရဲ့ချစ်ခွင့်ပန်တာကို ငြင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့Meenashiတစ်ယောက်ကတော့ လက်မလျှော့ဘဲနေ့တိုင်း Rajuနောက်ကိုလိုက်ကာ ချစ်ခွင့်ပန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Meenashiသူ့အပေါ်စိတ်ပျက်သွားအောင် Rajuတစ်ယောက်နည်းမျိုးစုံသုံးခဲ့ပေမဲ့ Meenashiကတော့ သူ့နောက်လိုက်နေဆဲပါ။ နောက်ဆုံး‌မှာတော့Rajuဟာ Meenashiကိုအရှက်ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် Meenashiဟာ သူ့ဘဝကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ ဒီအကြောင်းကိုRajuအမေကသိသွားပြီး ဆူပူခဲ့တာကြောင့် Rajuတစ်ယောက် Meenashiကိုတောင်းပန်ဖို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ Meenashiဟာ သူ့ကိုချစ်ခွင့်ပန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းမှန်ကို Rajuတစ်ယောက်သိသွားတဲ့အချိန်မှာ Rajuနဲ့Meenashiတို့ အချစ်ရေးဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Super Machiဇာတ္ကားမွာေတာ့ Rajuလို႔ေခၚတဲ့ ကမ္းေျခကဘားတစ္ခုက အဆိုေတာ္ေကာင္ေလးကို Meenashiလို႔ေခၚတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္ခြင့္လာပန္ခဲ့တယ္။Meenashiဟာ Rajuထက္ပညာတတ္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းတဲ့အျပင္ အရာရာၿပီးျပည့္စုံၿပီး ေခ်ာေမာလွပတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေပမဲ့ Rajuကေတာ့ သေဘာမက်ခဲ့တာေၾကာင့္ Meenashiရဲ႕ခ်စ္ခြင့္ပန္တာကို ျငင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့Meenashiတစ္ေယာက္ကေတာ့ လက္မေလွ်ာ့ဘဲေန႔တိုင္း Rajuေနာက္ကိုလိုက္ကာ ခ်စ္ခြင့္ပန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ Meenashiသူ႔အေပၚစိတ္ပ်က္သြားေအာင္ Rajuတစ္ေယာက္နည္းမ်ိဳးစုံသုံးခဲ့ေပမဲ့ Meenashiကေတာ့ သူ႔ေနာက္လိုက္ေနဆဲပါ။ ေနာက္ဆုံး‌မွာေတာ့Rajuဟာ Meenashiကိုအရွက္ကြဲေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ Meenashiဟာ သူ႔ဘ၀ကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုRajuအေမကသိသြားၿပီး ဆူပူခဲ့တာေၾကာင့္ Rajuတစ္ေယာက္ Meenashiကိုေတာင္းပန္ဖို႔လိုက္ရွာရင္းနဲ႔ Meenashiဟာ သူ႔ကိုခ်စ္ခြင့္ပန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမွန္ကို ...
IMDB: 9.2/10 1,633 votes
Backpackers (Without Saying Goodbye) (2022) (App member only) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Backpackers(2022)"ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ အလုပ်ကိုစွဲလမ်းလှတဲ့ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့ပန်းချီပညာရှင်မလေးတို့တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လိုတွေများရှေ့ဆက်သွားကြမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့အချစ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လ်ဗာဒေါ်ကမ်ပိုဒိုနီကိုဟာ စပိန်နိုင်ငံမှာ အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ကိုစွဲလမ်းလွန်းလှတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့မိသားစုဟာ ကြီးမားလှတဲ့ hotel corporation ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ Cuzcoမြို့ကို ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရောက်ရှိလာရင်း အေရီယာနာဆိုတဲ့ပန်းချီပညာရှင်အမျိုးသမီးလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ အေရီယာနာကတော့ဆယ်လ်ဗာဒေါ်နဲ့မတူစွာ...ဘာချည်နှောင်မှုမှမရှိပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလေ့ရှိပြီးကျောပိုးအိတ်လွယ်ရင်း ခရီးတွေသွားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ မတူညီတဲ့ဘဝတွေရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့....... နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုမျိုးများ အချစ်တွေဖြစ်တည်လာမလဲ၊ ဆယ်လ်ဗာဒေါ်ကရော ဆောက်လုပ်ရေးကို အဆင်ပြေပြေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား၊ သူတို့နှစ်ယောက်ကရော တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဇာတ်ကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါနော်။ ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "Backpackers(2022)"ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးပါ။ အလုပ္ကိုစြဲလမ္းလွတဲ့ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြရွိတဲ့ပန္းခ်ီပညာရွင္မေလးတို႔ေတြ႕ဆုံၿပီး ဘယ္လိုေတြမ်ားေရွ႕ဆက္သြားၾကမလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္႐ိုက္ကူးထားတဲ့အခ်စ္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္လ္ဗာေဒၚကမ္ပိုဒိုနီကိုဟာ စပိန္ႏိုင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ကိုစြဲလမ္းလြန္းလွတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕မိသားစုဟာ ႀကီးမားလွတဲ့ hotel corporation ကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူဟာ Cuzcoၿမိဳ႕ကို ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ေရာက္ရွိလာရင္း ေအရီယာနာဆိုတဲ့ပန္းခ်ီပညာရွင္အမ်ိဳးသမီးေလးနဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္။ ေအရီယာနာကေတာ့ဆယ္လ္ဗာေဒၚနဲ႔မတူစြာ...ဘာခ်ည္ေႏွာင္မႈမွမရွိပဲလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနေလ့ရွိၿပီးေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ရင္း ခရီးေတြသြားတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ မတူညီတဲ့ဘဝေတြရွိတဲ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေတြ႕ဆုံၾကၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့....... ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးမ်ား အခ်စ္ေတြျဖစ္တည္လာမလဲ၊ ဆယ္လ္ဗာေဒၚကေရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကို အဆင္ေျပေျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား၊ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကေရာ တူညီတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာပဲ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ဇာတ္ကားထဲမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါေနာ္။ Review – KKK File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : ...
Backpackers (Without Saying Goodbye) (2022)
Super Sharanya (2022) (App member only) ##unicode Super Sharanyaဇာတ်ကားမှာတော့ Sharanyaဟာ ရွာငယ်လေးကနေ အင်ဂျင်နီယာဘာသာကိုသင်ကြားဖို့ ကောလိပ်ကိုရောက်လာသူဖြစ်တယ်။သူမထင်ထားသလို ကောလိပ်ဘဝဟာ ပျော်ဖို့မကောင်းဘဲနဲ့ အဆောင်ကစီနီယာအမတွေ အနိုင်ကျင့်တာခံရ ကျောင်းကနှစ်ကျလူမိုက်အကိုကြီးAijitရဲ့ နှောင့်ယှက်တာကိုခံရနေတာကြောင့် Sharanyaတစ်ယောက် အချိန်ရတိုင်း ကောလိပ်ကနေ အိမ်ပြန်ပြေးလေ့ရှိတယ်။ သူစိမ်းတွေနဲ့အရောာတဝင်နေရတာမကြိုက်ြိုက်တဲ့Sharanyaဟာ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သာ အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိပါတယ်။တစ်နေ့သူငယ်ချင်းSonaရဲ့ မြို့ကိုလိုက်လည်ရင်းနဲ့ လမ်းမှာကောင်လေးတစ်ဖွဲ့နဲ့ပြသာနာတတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဖွဲ့ထဲကDeepuဟာ Sharanyaကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောကျမိသွားပြီး Instragamမှာလိုက်ရှာကာ Sharanyaကိုချဉ်းကပ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျောင်းဝန်းမှာလဲ Sharanyaအခန်းဖော်Sageent၊နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားလူမိုက်Aijit၊ ဆရာဖြစ်သူArunတို့ကလဲ Sharanyaအချစ်ကိုရဖို့ ကြိုးစားနေကြသူဖြစ်ပါတယ်။ Deepuတစ်ယောက် Sharanyaအချစ်ကိုရဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ Sharanyaတစ်ယောက်ရော သူမကောလိပ်ဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအုံး။ ##zawgyi Super Sharanyaဇာတ္ကားမွာေတာ့ Sharanyaဟာ ႐ြာငယ္ေလးကေန အင္ဂ်င္နီယာဘာသာကိုသင္ၾကားဖို႔ ေကာလိပ္ကိုေရာက္လာသူျဖစ္တယ္။သူမထင္ထားသလို ေကာလိပ္ဘ၀ဟာ ေပ်ာ္ဖို႔မေကာင္းဘဲနဲ႔ အေဆာင္ကစီနီယာအမေတြ အႏိုင္က်င့္တာခံရ ေက်ာင္းကႏွစ္က်လူမိုက္အကိုႀကီးAijitရဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္တာကိုခံရေနတာေၾကာင့္ Sharanyaတစ္ေယာက္ အခ်ိန္ရတိုင္း ေကာလိပ္ကေန အိမ္ျပန္ေျပးေလ့ရွိတယ္။ သူစိမ္းေတြနဲ႔အေရာာတ၀င္ေနရတာမႀကိဳက္ျိုက္တဲ့Sharanyaဟာ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ရွိပါတယ္။တစ္ေန႔သူငယ္ခ်င္းSonaရဲ႕ ၿမိဳ႕ကိုလိုက္လည္ရင္းနဲ႔ လမ္းမွာေကာင္ေလးတစ္ဖြဲ႕နဲ ႔ ျပသာနာတတ္ခဲ့ၾကတယ္။အဲ့အဖြဲ႕ထဲကDeepuဟာ Sharanyaကိုျမင္ျမင္ခ်င္းသေဘာက်မိသြားၿပီး Instragamမွာလိုက္ရွာကာ Sharanyaကိုခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ေက်ာင္း၀န္းမွာလဲ Sharanyaအခန္းေဖာ္Sageent၊ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားလူမိုက္Aijit၊ ဆရာျဖစ္သူArunတို႔ကလဲ Sharanyaအခ်စ္ကိုရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသူျဖစ္ပါတယ္။ Deepuတစ္ေယာက္ Sharanyaအခ်စ္ကိုရဖို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲ။ Sharanyaတစ္ေယာက္ေရာ သူမေကာလိပ္ဘ၀ကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရႈအားေပးၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : ...
Frida (2002) (App member only) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးမဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ 2002 ခုနှစ်ထွက် Drama,Romance, Biography အမျိုးအစား IMDb rating 7.4 ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဟောင်း၊ ဇာတ်လမ်းကောင်းဖြစ်တဲ့ "Frida" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။ ရုပ်ရှင်ခေါင်းစီးက ဖရီဒါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ portraits/ self-portraits ပိုင်းတွေမှာ အများနဲ့မတူတဲ့ ဖန်တီးမှု ပန်းချီလက်ရာမျိုးကို ရေးဆွဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မက္ကဆီကန် ပန်းချီဆရာမ ဖရီဒါ ကာဟိုလို ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို တစေ့တစောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Frieda and Diego Rivera, Henry Ford Hospital, My Birth ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေဟာ ထင်ရှားတဲ့ပန်းချီလက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ double self-portrait အနေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ The two fridas၊ မတော်တဆမှုကြောင့် ကျိုးကြေသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ကျောရိုး အ ကြောင်း အရင်းခံရေးဆွဲထားတဲ့ The broken column၊ လောကဓံရိုက်ချက်တွေကြားမှာ ပြိုလဲခဲ့စဉ်က သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို ဖွင့်ထုတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ Henry ...
IMDB: 7.4/10 88,035 votes
DJ Tillu (2022) ##unicode DJ Tillu ဇာတ်ကားမှာတော့ Tilluဟာ အောင်မြင်တဲ့DJသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ ကလပ်မှာသီချင်းဆိုတဲ့ အဆိုတော်ကောင်မလေးRadhikaကိုတွေ့သွားကာ မြင်မြင်ချင်းသဘောကျမိသွားခဲ့ပါတယ်။ Tilluက Radhikaကိုလက်ထပ်ဖို့အထိတွေးထားခဲ့ပေမဲ့ Radhikaမှာတော့ Rohitလို့‌ခေါ်တဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်။Tilluနဲ့Radhika‌အကြောင်းကို Rohitတစ်ယောက်သိသွားချိန်မှာတော့ Radhikaနဲ့ Rohitစကားများရင် မတော်မဆဖြစ်ကာ Radhikaက Rohitကိုသတ်မိသွားခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှမသိတဲ့Tilluတစ်ယောက်ကတော့ Radhikaအိမ်ကိုရောက်လာပြီး လူသေအလောင်းမြင်ကာ ထိတ်လန့်ပြီး ရဲတိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ Radhikaကငိုယိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အတွက် လူသေအလောင်းကို ကူညီဖျောက်ဖျက်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်ခဲ့တယ်။ Radhikaနဲ့Tilluတို့ ဒီလူသတ်မှုကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင့်ပါမလားဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi DJ Tillu ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Tilluဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့DJသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ေန႔မွာေတာ့ ကလပ္မွာသီခ်င္းဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ေကာင္မေလးRadhikaကိုေတြ႕သြားကာ ျမင္ျမင္ခ်င္းသေဘာက်မိသြားခဲ့ပါတယ္။ Tilluက Radhikaကိုလက္ထပ္ဖို႔အထိေတြးထားခဲ့ေပမဲ့ Radhikaမွာေတာ့ Rohitလို႔‌ေခၚတဲ့ ရည္းစားတစ္ေယာက္ရွိေနခဲ့တယ္။Tilluနဲ႔Radhika‌အေၾကာင္းကို Rohitတစ္ေယာက္သိသြားခ်ိန္မွာေတာ့ Radhikaနဲ႔ Rohitစကားမ်ားရင္ မေတာ္မဆျဖစ္ကာ Radhikaက Rohitကိုသတ္မိသြားခဲ့တယ္။ ဘာကိုမွမသိတဲ့Tilluတစ္ေယာက္ကေတာ့ Radhikaအိမ္ကိုေရာက္လာၿပီး လူေသအေလာင္းျမင္ကာ ထိတ္လန႔္ျပီး ရဲတိုင္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပမဲ့ Radhikaကငိုယိုၿပီးေတာင္းပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူေသအေလာင္းကို ကူညီေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးဖို႔ သေဘာတူလိုက္ခဲ့တယ္။ Radhikaနဲ႔Tilluတို႔ ဒီလူသတ္မႈကိုဖုံးကြယ္ထားႏိုင့္ပါမလားဆိုတာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
IMDB: 7.8/10 1425 votes
Sehari (2022) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ "Sehari" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအချစ်ဟာသကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာရွန်ဟာ ဆူဘူလက်ရှ်မီးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့လေးနှစ်လောက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လက်ထပ်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားပြီး ကတိတွေလည်းအများကြီးပေးထားကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ ဆူဘူဟာသူ့ကိုရိုဟစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအတွက်နဲ့သူ့ကိုထားသွားခဲ့ပါတယ် အသည်းကွဲနေတဲ့ဗာရွန်ဟာသူ့ချစ်သူကိုရွဲ့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ သူ့မိဘတွေစီစဉ်ပေးတဲ့ လက်ထပ်ပွဲကိုလက်ခံပြီးအိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ပြဿနာကဒီကစတာပါ ဗာရွန်တစ်ယောက်လက်ထပ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရင်း သတို့သမီးရဲ့အစ်မဖြစ်သူကိုသဘောကျသွားပါတယ် ဗာရွန်တစ်ယောက်သူသဘောကျတဲ့သူကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေကြိုးစားသွားမလဲ မိဘတွေကနားဝင်အောင်နားချနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ "Sehari" ဆိုတဲ့အိႏၵိယအခ်စ္ဟာသကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ဗာ႐ြန္ဟာ ဆူဘူလက္ရွ္မီးဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႔ေလးႏွစ္ေလာက္တြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ လက္ထပ္ဖို႔အထိရည္႐ြယ္ထားၿပီး ကတိေတြလည္းအမ်ားႀကီးေပးထားၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဆူဘူဟာသူ႔ကို႐ိုဟစ္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးအတြက္နဲ႔သူ႔ကိုထားသြားခဲ့ပါတယ္ အသည္းကြဲေနတဲ့ဗာ႐ြန္ဟာသူ႔ခ်စ္သူကို႐ြဲ႕ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ သူ႔မိဘေတြစီစဥ္ေပးတဲ့ လက္ထပ္ပြဲကိုလက္ခံၿပီးအိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ျပႆနာကဒီကစတာပါ ဗာ႐ြန္တစ္ေယာက္လက္ထပ္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရင္း သတို႔သမီးရဲ႕အစ္မျဖစ္သူကိုသေဘာက်သြားပါတယ္ ဗာ႐ြန္တစ္ေယာက္သူသေဘာက်တဲ့သူကိုလက္ထပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဘယ္လိုေတြႀကိဳးစားသြားမလဲ မိဘေတြကနားဝင္ေအာင္နားခ်ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.5/10 41274 votes
Jan-e-Man (2021) (App member only) ##unicode Jan E Manဇာတ်ကားမှာတော့ Joymonတစ်ယောက်ဟာ Canadaမှာ သူနာပြုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရပေမဲ့ သူငယ်ချင်းမရှိမိသားစုမရှိတဲ့ နှင်းတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့မြို့ကြီးမှာ ဘဝကိုအထီးကျန်ကျန်ဖြတ်သန်းနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသက်30ပြည့်မွေးနေ့ကို အိန္ဒိယမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါတီလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ Sampathတစ်ယောက်မှာလဲ အရေပြားဆရာဝန်သူငယ်ချင်းFasialကြောင့် Joymonရဲ့မွေးနေ့ပွဲပါတီကို သူ့အိမ်မှာကျင်းပဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မွေးနေ့ပွဲပါတီအတွက်ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာဘဲ Sampathရဲ့အိမ်ရှေ့အိမ်က အဖိုးကြီးမှာနှလုံးရှော့ရပြီးသေဆုံးသွားပြီး ရုတ်တရတ်ကြီးအိမ်ရှေ့အိမ်မှာ ဈာပနာပွဲဖြစ်သွားတဲ့အခါ Sampathရဲ့အိမ်မှာကျင်းပမဲ့ Joymonရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ဘယ်လိုကျင်းပမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Jan E Manဇာတ္ကားမွာေတာ့ Joymonတစ္ေယာက္ဟာ Canadaမွာ သူနာျပဳအျဖစ္အလုပ္လုပ္ေနရေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းမရွိမိသားစုမရွိတဲ့ ႏွင္းေတြပတ္လည္ဝိုင္းေနတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ဘ၀ကိုအထီးက်န္က်န္ျဖတ္သန္းေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အသက္30ျပည့္ေမြးေန႔ကို အိႏၵိယမွာသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပါတီလုပ္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး အိႏၵိယကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ Sampathတစ္ေယာက္မွာလဲ အေရျပားဆရာ၀န္သူငယ္ခ်င္းFasialေၾကာင့္ Joymonရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲပါတီကို သူ႔အိမ္မွာက်င္းပဖို႔ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့သူတို႔ေမြးေန႔ပြဲပါတီအတြက္ျပင္ဆင္ေနတုန္းမွာဘဲ Sampathရဲ႕အိမ္ေရွ႕အိမ္က အဖိုးႀကီးမွာႏွလုံးေရွာ့ရၿပီးေသဆုံးသြားျပီး ႐ုတ္တရတ္ႀကီးအိမ္ေရွ႕အိမ္မွာ ဈာပနာပြဲျဖစ္သြားတဲ့အခါ Sampathရဲ႕အိမ္မွာက်င္းပမဲ့ Joymonရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲကို ဘယ္လိုက်င္းပမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow ==================================================================== App ေဒါင္းရန္ App ...
IMDB: 8.4/10 1,282 votes
Love Hostel (2022) ##unicode အိန္ဒိယရဲ့ ဟိန္နူ၊ မူစလင်ဘာသာရေးပရိပက္ခတွေကြားမှာ ဒီလိုဘာသာရေးမတူညီဘဲချစ်မိကြတဲ့ လူငယ်စုံတွဲတွေရဲ့သနားစရာဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့အမုန်းတရားတွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကြည့်လို့ကောင်းနေဦးမှာပါ မင်းသားက Vikrant Massey နဲ့ မင်းသမီးက Sanya Malhotraပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး နာမည်ကြီးတွေရဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟိန္နူကောင်မလေးနဲ့ မူစလင်ကောင်လေးချစ်ကြိုက်မိကြတယ် ဟိန္နူကောင်မလေး ဂျိုတီရဲ့မိသားစုက လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့မိသားစု အာဏာရှိတယ် ငွေရှိတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့် ဂျိုတီကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်လွန်းတဲ့အတွက် ဂျိုတီဟာ သူ့ချစ်သူ မူစလင်ကောင်လေး အာရှူးနဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ် တရားရုံးက သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး လုံခြုံတဲ့အိမ်တစ်အိမ်မှာထားပေးခဲ့ပါတယ် အဲဒီအိမ်မှာ အခြားသူတို့လိုစုံတွဲတွေနေပြီး အဆောင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့ အဲဒီအိမ်က အစောင့်ရဲတွေရဲ့အကျင့်ပျက်ယုတ်မာမှုတွေကိုလည်း သူတို့မှာခံရရှာတယ် သူတို့ကိုလိုက်သတ်ချင်နေတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းကြောက်ရပြန်တယ် ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားက သူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြည့်ရမယ့် thriller အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ##zawgyi အိႏၵိယရဲ႕ ဟိႏၷဴ၊ မူစလင္ဘာသာေရးပရိပကၡေတြၾကားမွာ ဒီလိုဘာသာေရးမတူညီဘဲခ်စ္မိၾကတဲ့ လူငယ္စုံတြဲေတြရဲ႕သနားစရာဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕အမုန္းတရားေတြကို ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႔ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေနဦးမွာပါ မင္းသားက Vikrant Massey နဲ႔ မင္းသမီးက Sanya Malhotraပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး နာမည္ႀကီးေတြရဲ႕ဇာတ္ကားလည္းျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဟိႏၷဴေကာင္မေလးနဲ႔ မူစလင္ေကာင္ေလးခ်စ္ႀကိဳက္မိၾကတယ္ ဟိႏၷဴေကာင္မေလး ဂ်ိဳတီရဲ႕မိသားစုက လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ႕မိသားစု အာဏာရွိတယ္ ေငြရွိတယ္ေပါ့ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ိဳတီကိုညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္လြန္းတဲ့အတြက္ ဂ်ိဳတီဟာ သူ႔ခ်စ္သူ မူစလင္ေကာင္ေလး ...
IMDB: 6.4/10 4575 votes
Nenu Leni Na Premakatha (2021) ##unicode ဒီအချစ်ဇာတ်ကားလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးပါ ၁၉၈၃ခုနှစ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ်ကကောင်လေးတို့ ရေဒီယိုလှိုင်းကချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို အစပိုင်းမှာပေါ့ပေါ့ပါးပါးမြင်တွေ့ရမယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့သနားစရာလေးဇာတ်လမ်းအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းအထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်မယ့်အချစ်ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှာနေထိုင်တဲ့ ရာဒါဆိုတဲ့မိန်းကလေးက ရမ်ဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးသမားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကို တိတ်တခိုးချစ်နေခဲ့တာပေါ့ တစ်နေ့မှာကျောင်းက ရမ်ကိုသွားချောင်းရင်း ရေဒီယိုကလပ်ထဲကို ရာဒါရောက်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ရေဒီယိုသုတေသနလုပ်ဖို့ ရာဒါလက်ထဲကို ဟမ်ရေဒီယိုဆိုတဲ့ဟာလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ် တစ်ညမှာတော့ ရေဒီယိုကနေ ဟဲလို လူရှိလားဆိုတဲ့အသံလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ရာဒါနဲ့ခရစ်ရှနာတို့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့မိတာပါပဲ ခရစ်ရှနာက ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ခရစ်ရှနာရဲ့စမ်းသပ်ချက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အတိတ်ကိုအချိန်ခရီးသွားပြီးဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ခရစ်ရှနာနဲ့ရာဒါရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ သူတို့ကြားထဲကပက်သက်မှုတွေနဲ့လှည့်ကွက်တွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီအခ်စ္ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ဇာတ္လမ္းဆန္းဆန္းေလးပါ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ကမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ကေကာင္ေလးတို႔ ေရဒီယိုလႈိင္းကခ်ိတ္ဆက္မိတဲ့အခါျဖစ္လာခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းေလးကို အစပိုင္းမွာေပါ့ေပါ့ပါးပါးျမင္ေတြ႕ရမယ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့သနားစရာေလးဇာတ္လမ္းအလွည့္အေျပာင္းေတြနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းအထိဆြဲေခၚသြားႏိုင္မယ့္အခ်စ္ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းပါပဲ ၁၉၈၃ခုႏွစ္မွာေနထိုင္တဲ့ ရာဒါဆိုတဲ့မိန္းကေလးက ရမ္ဆိုတဲ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကို တိတ္တခိုးခ်စ္ေနခဲ့တာေပါ့ တစ္ေန႔မွာေက်ာင္းက ရမ္ကိုသြားေခ်ာင္းရင္း ေရဒီယိုကလပ္ထဲကို ရာဒါေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရဒီယိုသုေတသနလုပ္ဖို႔ ရာဒါလက္ထဲကို ဟမ္ေရဒီယိုဆိုတဲ့ဟာေလးေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ တစ္ညမွာေတာ့ ေရဒီယိုကေန ဟဲလို လူရွိလားဆိုတဲ့အသံေလးေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရာဒါနဲ႔ခရစ္ရွနာတို႔ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့မိတာပါပဲ ခရစ္ရွနာက ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာေနထိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာကိုစိတ္ဝင္စားတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ ခရစ္ရွနာရဲ႕စမ္းသပ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အတိတ္ကိုအခ်ိန္ခရီးသြားၿပီးဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ခရစ္ရွနာနဲ႔ရာဒါရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မလဲ သူတို႔ၾကားထဲကပက္သက္မႈေတြနဲ႔လွည့္ကြက္ေတြကို ဒီဇာတ္ကားမွာေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Romance Subtitle ...
IMDB: N/A/10 1,524 votes
Nenu Leni Na Premakatha (2021)
Hridayam (2022) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားနာမည်Haridayamဟာ နှလုံးသားလို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စတွေရယ် အသက်၁၇နှစ်ကနေ၃၀နှစ်အထိ အာရွန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝဇာတ်ခုံအဖုံဖုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် imdb ratingကလည်း 8.8/10တောင်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း မင်းသား Pranav Mohanlalနဲ့ မင်းသမီး Kalyani Priyadarshanနဲ့ Darshana Rajendranတို့ပဲဖြစ်လို့ ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းကြိုက်သူတွေ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူသင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါ အာရွန်တစ်ယောက် ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆောင်မှာပျော်ကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြည့်ရူရင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုခံစားမြင်တွေ့ရမယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပထမဆုံးအချစ်ကိုရူးသွပ်ခဲ့တာတွေ အချစ်ဦးကိုမမေ့နိုင်တဲ့အာရွန်တစ်ယောက် ကောလိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အချစ်သစ်တစ်ခုကိုတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာရော အာရွန်ရဲ့နှလုံးသားက ဘယ်သူ့အတွက်ဖြစ်နေမလဲဆိုပြီးဖော်ကျူးထားတာဖြစ်လို့ အချစ်ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး ဒါ့အပြင် အာရွန်တစ်ယောက် ကောလိပ်မှာ လမ်းမှားရောက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေ၊ အသိတရားတွေရလမ်းမှန်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာတွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်ကိုရွေးချယ်ရတော့မယ့် အာရွန်တစ်ယောက် ဘဝကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်ခဲ့လဲဆိုပြီး ဒီဇာတ်ကားမှာ အာရွန်ရဲ့ ဘဝကိုအသေးစိတ်ရိုက်ကူးဖော်ပြထားလို့ ခံစားကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ဇာတ္ကားနာမည္Haridayamဟာ ႏွလုံးသားလို႔အဓိပၸါယ္ရၿပီး ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ ႏွလုံးသားေရးရာကိစၥေတြရယ္ အသက္၁၇ႏွစ္ကေန၃၀ႏွစ္အထိ အာ႐ြန္ဆိုတဲ့ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝဇာတ္ခုံအဖုံဖုံကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ imdb ratingကလည္း 8.8/10ေတာင္ရရွိထားတာပဲျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကလည္း မင္းသား Pranav Mohanlalနဲ႔ မင္းသမီး Kalyani Priyadarshanနဲ႔ Darshana Rajendranတို႔ပဲျဖစ္လို႔ ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းႀကိဳက္သူေတြ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္႐ူသင့္တဲ့ဇာတ္ကားပါ အာ႐ြန္တစ္ေယာက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အေဆာင္မွာေပ်ာ္ၾကတဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြၾကည့္႐ူရင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကိုခံစားျမင္ေတြ႕ရမယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္မွာ ပထမဆုံးအခ်စ္ကို႐ူးသြပ္ခဲ့တာေတြ အခ်စ္ဦးကိုမေမ့ႏိုင္တဲ့အာ႐ြန္တစ္ေယာက္ ေကာလိပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အခ်စ္သစ္တစ္ခုကိုေတြ႕လာတဲ့အခ်ိန္မွာေရာ အာ႐ြန္ရဲ႕ႏွလုံးသားက ဘယ္သူ႔အတြက္ျဖစ္ေနမလဲဆိုၿပီးေဖာ္က်ဴးထားတာျဖစ္လို႔ အခ်စ္ဒရာမာဇာတ္ကားေကာင္းေလးဆိုလည္းမမွားပါဘူး ဒါ့အျပင္ အာ႐ြန္တစ္ေယာက္ ေကာလိပ္မွာ လမ္းမွားေရာက္ခဲ့တဲ့ပုံေတြ၊ အသိတရားေတြရလမ္းမွန္ကိုျပန္ေရာက္ခဲ့တာေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မယ့္ အာ႐ြန္တစ္ေယာက္ ဘဝကိုဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ခဲ့လဲဆိုၿပီး ...
IMDB: 8.8/10 4,604 votes
Bangarraju (2022) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့"Bangarraju (ဘန်ဂါရာဂျူး)ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ "Soggade Chinni Nayana"ဆိုတဲ့ ကားလေးရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ် ပထမကားလေးတုန်းကလည်းလူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့ပြီး အခုဒီဒုတိယကားဟာဆိုရင်လည်း Box office မှာ ၆၃.၈၇ Crore အထိရရှိအောင်မြင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဘန်ဂါရာဂျူးတစ်ယောက်သူ့ရဲ့လူပြည်ကိုပြန်စဉ်အတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်ငရဲကနေ‌ကောင်းကင်ဘုံကို ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူရာမူနဲ့သီတာကလည်း မွေးလာတဲ့သူတို့သားလေးကို အဘိုးနာမည်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဂါရာဂျူးလို့ပဲပေးလိုက်ပါတယ် မြေးဖြစ်သူဘန်ဂါရာဂျူးဟာဆိုရင်နာမည်တင်တူတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့အဘိုးရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပွေရှုပ်တာဘယ်အရာကိုမှအလေးအနက်မထားတာ မျိုးတွေပါရှိနေပါတယ် ဒါကိုကောင်းကင်ဘုံကနေမြင်နေရတဲ့အဘိုးအဘွားတွေကစိတ်မချနိုင်ဘဲသူ့ရဲ့ ဘဝကြီးကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် တစ်ဖက်မှာလည်းဘုရားကျောင်းထဲကတန်ဖိုးကြီးရတနာတွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူဆိုးတစ်သိုက်ကလည်း ဘုရားကျောင်းရဲ့အစောင့်အရှောက်ဇာတာပါတဲ့ဘန်ဂါရာဂျူးကိုသတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစည်နေပါတော့တယ် အဘိုးဖြစ်သူဘန်ဂါရာဂျူးတစ်ယောက် သူ့မြေးဖြစ်သူဘဝကိုဘယ်လိုပြန်လည်တည့်မတ်သွားမလဲ လူဆိုးတွေလက်ထဲကနေဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့"Bangarraju (ဘန္ဂါရာဂ်ဴး)ဆိုတဲ့အိႏၵိယဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားေလးဟာဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ "Soggade Chinni Nayana"ဆိုတဲ့ ကားေလးရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္ ပထမကားေလးတုန္းကလည္းလူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အခုဒီဒုတိယကားဟာဆိုရင္လည္း Box office မွာ ၆၃.၈၇ Crore အထိရရွိေအာင္ျမင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ ဘန္ဂါရာဂ်ဴးတစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕လူျပည္ကိုျပန္စဥ္အတြင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္ငရဲကေန‌ေကာင္းကင္ဘုံကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံလိုက္ရပါတယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာသူ႔ရဲ႕သားျဖစ္သူရာမူနဲ႔သီတာကလည္း ေမြးလာတဲ့သူတို႔သားေလးကို အဘိုးနာမည္ျဖစ္တဲ့ဘန္ဂါရာဂ်ဴးလို႔ပဲေပးလိုက္ပါတယ္ ေျမးျဖစ္သူဘန္ဂါရာဂ်ဴးဟာဆိုရင္နာမည္တင္တူတာ မဟုတ္ဘဲ သူ႔အဘိုးရဲ႕အက်င့္ဆိုးေတြျဖစ္တဲ့မိန္းကေလးေတြနဲ႔ေပြရႈပ္တာဘယ္အရာကိုမွအေလးအနက္မထားတာ မ်ိဳးေတြပါရွိေနပါတယ္ ဒါကိုေကာင္းကင္ဘုံကေနျမင္ေနရတဲ့အဘိုးအဘြားေတြကစိတ္မခ်ႏိုင္ဘဲသူ႔ရဲ႕ ဘဝႀကီးကိုျပဳျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ တစ္ဖက္မွာလည္းဘုရားေက်ာင္းထဲကတန္ဖိုးႀကီးရတနာေတြကိုခိုးယူဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့လူဆိုးတစ္သိုက္ကလည္း ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕အေစာင့္အေရွာက္ဇာတာပါတဲ့ဘန္ဂါရာဂ်ဴးကိုသတ္ျဖတ္ဖို႔ႀကံစည္ေနပါေတာ့တယ္ အဘိုးျဖစ္သူဘန္ဂါရာဂ်ဴးတစ္ေယာက္ သူ႔ေျမးျဖစ္သူဘဝကိုဘယ္လိုျပန္လည္တည့္မတ္သြားမလဲ လူဆိုးေတြလက္ထဲကေနဘယ္လိုကယ္တင္မလဲဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
IMDB: 7.4/10 785 votes
Malli Modalaindi (2022) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Malli Modalaindi(2022)"ဆိုတဲ့ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေး ကြည့်ရှုရမဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့..... ဗစ်ခရမ်ဟာ အဖွားနဲ့အမေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီး professional စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူဟာ နီရှာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ချစ်ကြိုးသွယ်ကာလက်ထက်ခဲ့ပေမဲ့ စိတ်သဘောထားချင်းမတူညီမှုများကြောင့် ကွာရှင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူဟာ သူနဲ့နီရှာကွာရှင်းဖို့အတွက် နီရှာဘက်မှရှေ့နေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ ပါဗီဆိုတဲ့ရှေ့နေမလေးကို သဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဗစ်ခရမ်ဟာ ပါဗီကိုချဉ်းကပ်ရင်း ပါဗီထံမှအချစ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲကြပြီးတဲ့နောက်မှာ ပါဗီဟာ ဗစ်ခရမ်ကိုလက်ထက်ကြဖို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ခါကွာရှင်းထားဖူးတဲ့ဗစ်ခရမ်ဟာ လက်ထက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် သူတိုနှစ်ယောက်ဟာ ကတောက်ကဆတွေဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲကြတဲ့အခါမှာတော့...... ဗစ်ခရမ်တစ်ယောက် ပါဗီကိုတကယ်ပဲလက်လွှတ်လိုက်ရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပါဗီကိုလက်ထက်ဖို့ထိများစိတ်အားထက်သန်လာမလား၊ ပါဗီကရော တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကိုပဲလက်ခံပေးမလား ၊ဗစ်ခရမ်ကိုပဲပြန်ပြီးလက်ခံပေးမလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "Malli Modalaindi(2022)"ဆိုတဲ့ ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလး ၾကည့္ရႈရမဲ့အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့..... ဗစ္ခရမ္ဟာ အဖြားနဲ႔အေမရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး professional စားဖိုမႉးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူဟာ နီရွာဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ကာလက္ထက္ခဲ့ေပမဲ့ စိတ္သေဘာထားခ်င္းမတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြာရွင္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ သူဟာ သူနဲ႔နီရွာကြာရွင္းဖို႔အတြက္ နီရွာဘက္မွေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရတဲ့ ပါဗီဆိုတဲ့ေရွ႕ေနမေလးကို သေဘာက်သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဗစ္ခရမ္ဟာ ပါဗီကိုခ်ဥ္းကပ္ရင္း ပါဗီထံမွအခ်စ္ကိုရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္တြဲၾကၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပါဗီဟာ ဗစ္ခရမ္ကိုလက္ထက္ၾကဖို႔ေျပာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ တစ္ခါကြာရွင္းထားဖူးတဲ့ဗစ္ခရမ္ဟာ လက္ထက္ဖို႔တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ သူတိုႏွစ္ေယာက္ဟာ ကေတာက္ကဆေတြျဖစ္ၿပီးလမ္းခြဲၾကတဲ့အခါမွာေတာ့...... ဗစ္ခရမ္တစ္ေယာက္ ပါဗီကိုတကယ္ပဲလက္လႊတ္လိုက္ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါဗီကိုလက္ထက္ဖို႔ထိမ်ားစိတ္အားထက္သန္လာမလား၊ ပါဗီကေရာ ...